मोबाइल एप सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय मोबाइल एपमार्फत सेवा दिँदै आएका कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । बजारमा स्मार्टफोनको तीव्र विस्तारसँगै एपमार्फत अनलाइन सेवा दिने कम्पनी बाक्लिँदै गएका हुन् ।
अहिले १ दर्जनभन्दा बढी मोबाइल एप सेवाप्रदायक प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा शेयर राइडिङ (मोटरसाइकल तथा ट्याक्सी) स्टार्टअप कम्पनीहरू टुटल, पठाओ, सारथी, यात्रु लगायत छन् । त्यसैगरी डिजिटल भुक्तानी तथा वालेट सेवाप्रदायक ई–सेवा, खल्ती, आईएमई पे, प्रभु पे, आई पे पेमेन्ट गेटवे कम्पनीहरू बजार विस्तारको प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । ई–सेवाले औपचारिक रूपमा सन् २००९ सालदेखि मोबाइल मार्पmत डिजिटल भुक्तानी सेवा दिन थालेको हो । डिजिटल भुक्तानीका लागि अहिले यो कम्पनी निकै लोकप्रिय मानिएको छ ।
स्मार्टफोनको बढ्दो बजारसँगै प्रविधिको प्रयोग र एपमार्फत गर्न सकिने व्यवसाय पनि धमाधम सञ्चालनमा आएका हुन् । कम लगानीमै सञ्चालन गर्न सकिने र ग्राहकले छिटोछरितो सुविधा पाउने भएकाले यस्ता व्यवसाय सफल समेत भएका छन् । साथै यस क्षेत्रका स्टार्टअप कम्पनीले हजारौंलाई रोजगारीको अवसर पनि दिएका छन् । स्मार्टफोनको बजार बढ्दै गएपछि अधिकांश काम मोबाइल एपबाटै हुन थालेको टुटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिक्षित भट्टले बताए ।
गत केही हप्ताअघि मात्र ‘सेल पे’ नेपाली बजारमा आएको थियो । विभिन्न होटल, रेस्टुराँ र घरमा बनेको खानाका परिकार चखाउने फूडमान्डु, फूडमारियो, मामहाम, हाम्रो किचेन, भोकलाग्यो, भोजडिल्स आदि छन् । यस्तै सस्तो डिल्स, दराज, हाम्रो बजार लगायत कम्पनीले अनलाइन मार्फत विभिन्न सामग्री विक्री गर्दै आएका छन् ।
मोबाइल एपमार्फत सेवा दिएका यस्ता कम्पनीले रू. ३ करोडदेखि १० करोडसम्म लगानी गरेका छन् ।
ई–सेवाका संस्थापक अस्गर अली डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग, फाइदा र यसको प्रभावकारिताबारे नागरिकमा सचेतना बढेको बताउँछन् । ई–सेवामा २० लाख खाता खुले पनि त्योभन्दा बढी मानिस यसबाट लाभान्वित भइरहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय क्यासलेस प्रविधिले प्राथमिकता पाएसँगै एप प्रयोगकर्ता समेत बढ्दै गएका छन् । ग्रामीण भेगमा सूचना प्रविधिको पहुँचको कारण एपको प्रयोग कम छ । खल्तीका संस्थापक अमित अग्रवाल मोबाइल वालेटहरूमा पछिल्लो समय सबै वर्गको आकर्षण देखिन थालेको बताउँछन् । यस्तै फूडमान्डुका संस्थापक मनोहर अधिकारी अबको भविष्य अनलाइन माध्यममै निर्भर रहने धारणा राख्छन् ।
नेपालमा सञ्चालित मोबाइल एप कम्पनीहरूबाट पैसा पठाउने तथा प्राप्त गर्ने, रिचार्ज गर्ने, पानी र बिजुली बिलहरूको भुक्तानी गर्ने, बस, हवाई सेवा, फिल्म लगायतको टिकट काट्ने, रकम ट्रान्सफर गर्ने, विद्यालय र कलेजका शुल्कहरू भुक्तानी गर्ने, रेस्टुराँ, ग्रोसरी, डिपार्टमेन्ट स्टोरका साथै साना–ठूला खुद्रा पसलमा भुक्तानी, अनलाइन स्मार्ट पार्किङ, ट्याक्सी तथा बाइक बूकिङ, स्मार्ट लर्निङ सम्मका डिजिटल कारोबार हुँदै आएका छन् । नेपाल सरकारले ७५३ ओटै स्थानीय तहमा मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउँदै छ । यसमध्ये हाल ४ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा मोबाइल एप शुरू भइसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादवले जानकारी दिए । गत केही हप्ताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नागरिक’ एप सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । अब प्रत्येक नगरिकले सरकारी सेवासुविधा सोही एपबाट प्राप्त गर्न सक्छन् ।
गत केही हप्ताअघि मात्र डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी सेल पे र अनलाइन ट्याक्सी सेवाप्रदायक कम्पनी यात्रु सञ्चालनमा आएका छन् । यी दुवै कम्पनीबाट मोबाइल एपमार्फत नै सेवा लिन सकिनेछ ।
नेपाल टेलिकमले पनि ‘युटिलिटी पेमेन्ट सर्भिस’सहित मोबाइल मनी प्रविधि प्रयोग थाल्ने तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र टेलिकमको संयुक्त लगानीमा भुक्तानी सेवा प्रदायक पब्लिक कम्पनी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता समेत भइसकेको छ ।
अब टेलिकम अन्तर्गत एक सहायक कम्पनी खडा गरिनेछ, जसको पूँजी रू. १ अर्ब बराबरको हुने टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बताए । उक्त सेवाका लागि अहिले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने प्रक्रिया चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।